ख्रीष्टका चार तस्वीरहरू – Word of Truth, Nepal
मानौं तपाईको एउटा पत्र-मित्र छ – एक व्यक्ति जोसँग तपाई पत्र आदन- प्रदान गर्नुहुन्छ तर जोसँग तपाईंको प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छैन। एक दिन तपाईंले पत्रमा यसरी लेख्नुभयो, “म तपाईंलाई अझ राम्ररी चिन्न चाहन्छु। कृपया एउटा फोटो पठाउनुहोला अनि तपाई कस्तो हुनुहुन्छ मैले देख्न पाउने थिएँ।” केले तपाईंलाई आफ्नो पत्र-मित्रलाई चिन्न बढी मद्दत गर्ला— तपाईको पत्र-मित्रले एउटा फोटो पठाए भने कि चारओटा फोटोहरू पठाए भने? ______________________________ _________________________________ ________। किन?
परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टका चारओटा तस्वीरहरू दिनुभएको छ। यी हुन् सुसमाचारका चार लखोटहरू जसलाई मत्ती, मर्कूस, लुका र यूहन्ना भनिन्छ। परमेश्वरले एउटै मात्र सुसमाचारको लेखोट दिन सक्नुहुन्थ्यो तर चारओटा हुनु अझ राम्रो हो। १ पत्रुस १:८ अनुसार हामीले उहाँलाई आफ्ना आँखाले कहिल्यै देखेका छैनो तरैपनि के परमेश्वर हामीले उहाँको पुत्रलाई राम्ररी चिनेको चाहनुहुन्छ (यूहन्ना १७:३; फिलिप्पी ३:१०)?____________________। हामी उहाँलाई जति-जति राम्ररी चिन्छौं त्यति नै हामी कसलाई पनि चिन्छौं (यूहन्ना ८:१९; १४:७)? _____________________। हामी ख्रीष्टलाई जति-जति प्रस्ट देख्छौं (यी चारओटा तस्विरहरूलाई हेर्दै जाँदा) त्यति नै हामी कसालाई पनि देख्छौं (यूहन्ना १४:९)?_________________। येशू नै परमेश्वरको सिद्ध तस्वीर हुनुहुन्छ। यदि तपाईं परमेश्वर पिता कस्तो हुनुहुन्छ भनी जान्न चाहनुहुन्छ भने पुत्रलाई हेर्नुहोस्। येशू ख्रीष्ट “___________ परमेश्वरका _______________” हुनुहुन्छ (कलस्सी १:१५)। अदृश्य परमेश्वरलाइ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईं उहाँको पुत्रलाई देख्न सक्नुहुन्छ जसरी उहाँ पवित्रशास्त्रमा प्रकट गरिनुभएको छ।
तपाईंको पत्र-मित्रका ती चारओटा फोटोहरूलाई फेरी विचार गर्नुहोस्। के ती सबै फोटोहरूका बीचमा आपसमा मिल्ने त्यस्ता केहि कुराहरू हुन्छन् होला? केही कुराहरू चारैओटा फोटोहरूमा समानरूपमा पनि भेटिन्छन् होला? (सायद तपाईंको पत्र- मित्रले चारैओटा फोटोहरूमा एउटै स्वीटर लगाउनुभएको होला वा हरेक फोटोको पृष्टठभूमीमा एउटै रूख होला? प्रत्येक फोटोमा अरू तीन फोटोहरूभन्दा कुनै न कुनै हिसाबलमा फरक हुन्छ होला? तीमध्ये तीनओटा फोटोहरू धेरै मिल्दाजुल्दा (सयाद ती प्रत्येक नै एउटै कोठामा केही मिनेटकै अन्तरमा खिचिएका) हुन अनि चोथो फोटोचाहिँ अत्यान्तै फरक (सायद अर्कै समयमा अर्कै लुगा लगाएको बेला, भिन्न दृष्यका बीच घरको बाहिर खिचिएको ) हुन सम्भव छ? के तपाईंले यसो भन्नुहुनेछ, “यो चौथो फोटो अरू तीनभन्दा यति भिन्न छ कि यो त अर्कै व्यक्ति हुनुपर्छ”?
• सबै चार सुसमाचारहरूले ५००० लाई खुवाइएको बारेमा बताउँदछन्।
• सबै चार सुसमाचारहरूले प्रभलाई पत्रुसले इन्कार गरेको बारेमा बताउँदछन्।
• सबै चार सुसमाचारहरूले येशूको पक्राउ र मानविय इन्साफको बारेमा बताउँदछन्।
• सबै चार सुसमाचारहरूले येशूको क्रूसको टँगाइको बारेमा बताउँदछन्।
• सबै चार सुसमाचारहरूले येशूको बौरिउठाइको बारेमा बताउँदछन्।
• मत्तीले मात्रै यूसुफ र मरियम मिश्रमा पलायन भएका बारेमा बताउदछन् (मत्ती २:१२-२३)।
• मर्कूसले मात्रै एक अन्धा मान्छेको दुई चरणको चंगाइको बारेमा बताउँदछन् (मर्कूस ८:२२-२६)।
• लुकाले मात्रै हराएको छोरोको दृष्टान्त बताउँदछन् (लुका १५:११-३२)।
• यूहन्नाले मात्रै लाजरसको मृत्युबाटको बौरिउठाइको बारेमा बताउँदछन् (यूहन्ना ११:१-४५)।
कोही व्यक्तिहरू सुसमाचारका लेखोटहरूमा त्रुटीहरू र अन्तर- विरोधहरू छन् भन्ने दावी गर्छन् तर हामी जान्दछौं सबै चारैओटा सुसमाचारहरूमा सत्य मात्रै छन्। परमेश्वरको वचनका कुनै पनि भागमा कुनै त्रुटीहरू वा गल्तहरू छैनन्। कसैले यसो भन्ला, ” चार सुसमाचारका पुस्तकहरू येशू मर्नुभएको धेरै वर्षपछि मात्रै लेखिएका हुन् (जु कुरा साँचो पनि हो) यसकारण सुसमाचारका लेखकहरूले येशूले भन्नभएका र गर्नुभएका कुराहरू कसरी सम्झन सके?” यसको जवाफ तपाईं कसरी दिनुहुन्छ? उनीहरूलाई सिद्धरूपमा सम्झना गर्न सक्न कसले सहायता गर्नुभयो ( हेर्नुहोस् यूहन्ना १४:२६)?________________________।
“सुसमाचार” को अर्थ हो “शुभ खबर”। १ कोरिन्थी १५:१-५ अनुसार सुभ खबर के हो:
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:55:012020-04-28 14:34:03ख्रीष्टका चार तस्वीरहरू
नयाँ नियमका पुस्तकहरूपरमेश्वरको पुत्रलाई दर्शाउ�...